बिचित्र संसार – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
लण्डन – भारतीय स्वतन्‍त्रतावादी नेता महात्मा गान्धीको चस्मा लिलाम बढाबढबाट चार करोड आठ लाख रुपैयाँमा विक्री भएको छ । बेलायती लिलाम गर्ने एक कम्पनीले गान्धीको चस्मा एक अमेरिकी सङ्ग्रहकर्तालाई विक्री गरेका हुन् । ईस्ट ब्रिस्टल अक्शन्श लिमिटेडका अनुसार अगस्ट महिनाको ३ तारिखमा एउटा साधारण खामभित्र कुनै व्यक्तिले छोडेको अवस्थामा उक्त चस्मा फेला पारिएको थियो। बीबीसीमा […]
काठमाडौं, ५ साउन : प्राय जसो सानो सानो कुराले घरमा झगडा भइरहेको हुन्छ । धेरै मानिसहरु आफ्नो पति पत्नीले माया नगरेको भन्दै दुःख पोखेका हुन्छन् तर एक महिलाले पतिले धेरै माया गरेकोले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकी छिन् । युएईकी एक महिला पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको कारण अहिले निकै चर्चामा छिन् । ती महिलाले पतिसँग […]
करिब २ सय वर्ष पूरानो व्हिस्की ब्राण्ड जोनी वाकर अब कागजका बोतलमा बजारमा आउँदैछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो मदिरा कम्पनी मध्येको एक डियाजियोको स्वामित्वमा रहेको जोनी वाकर ब्राण्डका व्हिस्कीलाई कागजका बोतलमा ल्याउने निर्णय कम्पनीले गरेको हो । जोनी वाकरका व्हिस्कीहरु आमरुपमा काँचका बोतलमा उपलब्ध हुने गरेका छन् । पर्यावरणलाई ध्यानमा राख्दै तयार गरिएको प्याकेजिङको ट्रायल […]
अण्डा पहिले कि कुखुरा ? यो बहस कहिल्यै टुंगिँदैन । तर यो चाहीँ सत्य हो कि कुखुराले अण्डा पार्दछ र अण्डाबाटै चल्ला कोरलिएर वयस्क कुखुरा बन्दछ । तर छिमेकी मुलुक भारतको ओडिसा राज्यमा चाहीँ एउटा कुखुराले अण्डा नपारीकनै सिधै चल्ला जन्माएको छ । ओडिसाको नुआपाडा जिल्लामा एक कुखुराले बच्चा जन्माएपछि मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । […]
जर्मनीमा एकजना व्यक्तिले भुलबस अनलाइनमा यसरी क्लिक गरे कि २८ वटा टेस्ला कार खरिदका लागि अर्डर गयो । अनलाइनबाट मोडेल थ्री को टेस्ला कार खरिद गर्नका लागि क्लिक गर्ने क्रममा भुलबस २८ वटा कारका लागि उनले अर्डर गर्न पुगे । सोसल मिडिया प्लाटर्फम रेडिटबाट सार्वजनिक भएको उक्त घटना अहिले विश्वका धेरै मिडियाहरुमा छाइरहेको छ । […]
वासिंटन, २३ असार : कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्न विश्वका अधिकांश सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । सुरुमा त कोभिड १९ को महामारी समर सुरु भएसँगै हराउला भन्ने थियो । तर दिन, साता हुँदै महिना बितिसक्दा पनि यो नष्ट नहुँदा लकडाउन पनि लम्ब्याउन थालिएको छ । आम मानिसहरु भने लकडाउनको दिक्दारीबाट ‘रिफ्रेस’ हुन अनेक उपाय खोजिरहेका […]
वासिंटन, २३ असार : अमेरिकी कलाकार स्पेन्सर ट्युनिक ‘मास न्युड फोटोग्राफ्स’का लागि चर्चित छन् । उनी सयौँ वा कहिले त हजारौँ मानिसलाई सामूहिक रुपमा न्युड फोटोग्राफीमा सहभागी गराउँछन् । प्रारम्भिक चरणमा कानुनी झमेला र विवाद झेले पनि स्पेन्सर अचेल सामुहिक नग्न तस्बिरलाई कलात्मक रुपक प्रस्तुत गर्न माहिर भनेर चिनिछन् । कोभिड १९ महामारीका कारण कलाकार […]
अमेरिका, २३ असार : उत्तरी अमेरिकाको रकी माउन्टेन्समा लुकाइएको १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सुन, मणिमाणिक्य र बहुमूल्य वस्तु सहितको खजाना फेला परेको छ । प्राचीन वस्तुहरू संकलन गर्ने फरेस्ट फेनले एक दशकभन्दा अगाडि सो पीतलले बनेको कन्तुर लुकाएर भेट्टाउन सक्नेका लागि छाडिदिएका थिए। उनको आह्वानपश्चात् हजारौँ मानिसहरूले सो कन्तुर खोजेको, केहीले जागिर नै […]
तान्जानिया, २३ असार : तान्जानियाका एक सामान्य नागरिक रातारात करोडपति बनेका छन्। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो तान्जानाइट नामक बहुमूल्य रत्न फेला पारेका उनी करोडपति बनेका हुन् । कुल १५ किलो तौल भएका दुईवटा पत्थर फेला पारेका सानिनिउ लाइजरले खानी मन्त्रालयबाट ४१ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेका हुन्। ‘भोलि ठूलो भोज हुन्छ,’ लाइजरले भने । […]
काठमाडौँ, २३ असार : सर्पहरु भुइँमा घिस्रिँदै गरेको देख्दा मात्रै पनि धेरैको सात्तो उड्छ । तर ती सर्प हावामा उडेको देखियो भने कस्तो होला ? केही त्यस्ता सर्प हुन्छन्, जो रुखबाट हावामा उड्न सक्छन् । खासगरी दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा यस्ता सर्प भेटिन्छन् ।भर्जिनिया टेकका वैज्ञानिकहरुले यही सोमबार यसबारे अनुसन्धान सार्वजनिक गर्नुअघि आम […]